3 Email Marketing Tools Need Kwesịrị Knowmara Banyere | Martech Zone
Ederede ka ịdenye aha - Ọ bụrụ na gị na ụlọ ọrụ na-ere ahịa email na-arụ ọrụ, ọ ga-abụrịrị na ha na onye ibe ha nwere njikọ ugbu a na-enye ederede iji denye aha. Ederede ịdenye aha bụ nnukwu ngwa ahịa email. Ọ bụ aka pụọ ​​ịbịaru ndepụta email gị. Ndị na-ere ahịa email gị na-ewepụta oge iji setịpụ ihe a mgbe ị na-anọdụ ala na-ele ya ka ọ na-agba ọsọ. Na obere mgbalị, ị ga-ahụ otu ọ dị mfe ndị mmadụ nwere ike isi dee ederede iji nweta ozi ịntanetị gị.
Nyocha Ndị Ahịa Email - Litmus na Email na Acid. Emaillọ ahịa ahịa email dị mma ga-agwa gị na ịkwesịrị ịnwale ozi ịntanetị gị tupu izipu ya. Ngwaahịa ịre ahịa email abụọ a na-enyere gị aka ịme nke a n'ụzọ dị mfe na enweghị mbọ. Can nwere ike ikwunye na gị ozi ịntanetị na ọ ga-egosi gị otú ọ sụgharịrị dị iche iche na ihe nchọgharị na dị iche iche mobile ngwaọrụ. Ọ dị mma maka inye aka ijide n'aka na onye ọ bụla na-enweta mkpọsa email gị na-enweta nsụgharị Kachasị mma.
Isiokwu Line Testers. Ide ederede ederede dị mfe. Mepụta usoro isiokwu dị ukwuu siri ike. Na-arụ ọrụ na ngwaọrụ email ndị a: Litmus (ọzọ!) nwere ike ijide n'aka na ị nọ n'ụzọ ziri ezi. Site na itinye akara isiokwu gị na nke ọ bụla n'ime ngwaọrụ ndị a, ịnwere ike ịnweta nzaghachi na ihe na-arụ ọrụ na ihe na-adịghị arụ ọrụ. Ozugbo ị matara ihe anaghị arụ ọrụ, nweere onwe gị ịgbanwe ya, tinye ya n'ime, ma nwaa ọzọ. Nwekwara ike iji Twitter nwalee usoro isiokwu. Pịnye na nsụgharị ole na ole ị na-eche maka iji, jikọọ ụfọdụ ọdịnaya, wee hụ ụdị nzaghachi ị na-enweta site na otu na nke ọzọ.
Na, n'ezie, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ere ahịa email, ha nwere ike inyere aka ijide n'aka na ị maara banyere ngwaọrụ ndị a dị iche iche iji mee ka atụmatụ email gị na mkpọsa email kachasị mma. Ọ dị mkpa ịnwe usoro ịre ahịa email na ịghara imebi ozi ịntanetị ndị debanyere aha. Y’oburu n’inweghi atumatu, inwere ike isoro ndi n’edetu ahia gha aru oru.
Tags: Njikọemail Marketingemail na acidlitmusisiokwu akara uleederede ịdenye aha